Fidirana sy fifanoherana amin'ny famonoana ho faty sy ny fanamelohana ho faty
Olana Tantara & fotony
Ny fanasaziana ambony, izay nantsoina koa hoe "fanamelohana ho faty," dia ny fananganana ny fiainan'ny olombelona alohan'ny fisaintsainana sy fikasana ho valin'ny heloka bevava nataon'io olona voaheloka voaheloka io.
Miparitaka be ny fijoroana any Etazonia, ary manohana ny mpanohana sy ny mpanao fihetsiketsehana ny fanamelohana ho faty.
Mifamahofaho manasazy ny sazy farany, i Amnesty International dia mino fa "ny fanamelohana ho faty no fanilihana tanteraka ny zon'olombelona.
Io no famonoana olona efa nomanina mialoha sy mangatsiaka ho an'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fanjakana amin'ny anaran'ny fitsarana. Manitsakitsaka ny zo ho amin'ny fiainana izy ... Izany no sazy farany feno fanaratsiana sy tsy misy maha-olona ary manimba. Tsy misy na inona na inona fanamarinana ho an'ny fampijaliana na noho ny fitsaboana mahatsiravina. "
Manohitra ny fanasaziana lehibe ny Clark County, Indiana Prosecuting Attorney dia manoratra fa "... misy ireo voampanga izay nahazo ny sazy farany izay tsy maintsy atolotsainan'ny fiarahamonintsika amin'ny famonoana olona amin'ny toe-javatra miharatsy ankehitriny. Mino aho fa masina ny fiainana. ny fiainan'ny vono olona tsy manan-tsiny iray nilaza fa tsy manana zo hanakana ilay mpamono olona tsy hamono intsony indray ny fiarahamonina. Raha ny hevitro, ny fiarahamonina dia tsy manana zo afa-tsy ny adidiny amin'ny fiarovana ny tsy manan-tsiny. "
Ary Katolika Cardinal McCarrick, arsevekan'i Washington, dia nanoratra hoe "... ny sazin'ny fahafatesana dia mampihena antsika rehetra, mampitombo ny tsy fanajàna ny fiainan'ny olombelona, ​​ary manolotra ny fanamarihana mampalahelo izay azontsika ampianarina fa diso ny famonoana amin'ny famonoana."
Famonoana ho faty any Etazonia
Tsy nampiharina foana ny fanamelohana ho faty tany Etazonia na dia nilaza aza ny ReligiousTolerance.org fa "eo amin'ny 13.000 eo ho eo no efa novonoina ara-dalàna nanomboka tamin'ny andron'ny fanjanahantany".
Ny vanim-potoan'ny Depression 1930, izay nahitana tampony manan-tantara tamin'ny famonoana, dia nihena be tamin'ny taona 1950 sy 1960.
Tsy nisy famonoana nitranga tany Etazonia teo anelanelan'ny 1967 ka hatramin'ny 1976.
Tamin'ny 1972, ny Fitsarana Tampony dia nanala tanteraka ny fanamelohana ho faty, ary namadika ny fanamelohana ho faty gadra an-jatony maty am-ponja.
Tamin'ny 1976, didy iray hafa navoakan'ny Fitsarana Tampony no nahita sazy lehibe indrindra ho ny Lalàm-panorenana. Hatramin'ny taona 1976 hatramin'ny 3 Jona 2009, olona 1.167 no novonoina tany Etazonia
Ny ankamaroan'ny firenena demaokratika any Eorôpa sy Amerika Latina dia nanafoana ny sazy faratampony nandritra ny dimampolo taona farany, fa ny Amerikana, demokrasia maro any Azia, ary saika ny fitondrana tsy refesi-mandidy rehetra no mitazona izany.
Ny heloka bevava mitondra ny fanamelohana ho faty dia miovaova eran-tany amin'ny famadihana sy ny famonoana ho amin'ny fangalarana. Amin'ny tafika manerana an'izao tontolo izao, ny fitsarana-miaramila dia nanasazy sazy an-dalambe ho an'ny kanosa, fialofana, tsy fankatoavana ary fikomiana.
Ny tatitra isan-taonan'ny Per Amnesty International tamin'ny taona 2008, dia "olona farafahakeliny 2.390 no fantatra fa novonoina tany amin'ny firenena 25 ary farafaharatsiny 8.864 ireo olona voaheloka ho faty tany amin'ny firenena 52 manerana izao tontolo izao:
Famonoana tamin'ny 2008, avy amin'ny firenena
Sina - 1 718
Arabia Saodita - 102
Etazonia - 37
Irak - 34
Korea Avaratra - 15 taona
Ny hafa rehetra - 66
Loharano - Amnesty International
Hatramin'ny volana Oktobra 2009, sazy an-tranomaizina any Etazonia dia saziana fanjakana 34 avy amin'ny fanjakana, ary koa ny governemanta federaly . Ny fanjakana tsirairay manana sazy an-tanindrazana ara-dalàna dia manana lalàna samihafa mikasika ny fomba amam-panao, ny fetran-taona ary ny heloka bevava izay mahafeno fepetra.
Nanomboka tamin'ny 1976 ka hatramin'ny Oktobra 2009 dia voaheloka 1 177 no novonoina tany Etazonia, ary nizarazara toy izao manaraka izao:
Fanatanterahana nanomboka tamin'ny 1976 - okt 2009, avy amin'ny Fanjakana
Florida - 68 taona
Missouri - 67 taona
Georgia - 46 taona
Carolina avaratra - 43
South Carolina - 42 taona
Ohio - 32 taona
Ny hafa rehetra - 149
Ny fanjakana sy ny faritra amerikana tsy misy lalàna fanamelohana ho faty dia Alaska, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota , Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin, District of Columbia , Samoa Amerikana , Guam, Nosy Mariana Avaratra, Pôrtô Rikô ary Nosy Virijiny Amerikana.
New Jersey dia nanaisotra ny fanamelohana ho faty tamin'ny taona 2007, ary New Mexico tamin'ny taona 2009.
Ny tantaran'i Stanley "Tookie" Williams dia maneho ny fahasarotan'ny sazy mihatra amin'ny fanamelohana ho faty .
Mr. Williams, mpanoratra iray sy nomena loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana sy ny literatiora izay novonoina tamin'ny 13 Desambra 2005, tamin'ny alàlan'ny fampidiran-dratsin'ny fanjakana California, dia nitondra sazy henjana ho adihevitra be olona.
Voampanga ho namono olona efatra tamin'ny 1979 i Mr. Williams, ary voaheloka ho faty. Williams nanambara ny tsy fananan-tsiny ireo heloka ireo. Izy koa dia mpiara-manorina ny Crips, andian-jiolahy an-dalam-pandringanana Los Angeles sy Los Angeles izay tompon'andraikitra amin'ny famonoana an-jatony.
Tokony ho dimy taona taorian'ny nisamborana azy, dia niova fo i Mr. Williams ary vokatr'izany dia nanoratra boky sy fandaharam-pampianarana maro mba hampiroborobo ny fandriampahalemana sy hiady amin'ny andian-jiolahy sy herisetra an-jatony. Nosorohana in-dimy ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana ary in-efatra izy nandritry ny loka Nobel ho an'ny Literatiora .
Mr. Williams 'dia niaina ny heloka bevava sy ny herisetra, ary avy eo ny fanavotana marina sy ny fiainan'ny asa tsara sy mahatalanjona.
Ny porofo mampiavaka an'i Williams dia tsy nanam-pahalalahana firy fa nanolotra ny famonoana olona efatra izy, na dia teo aza ny fanambarana minitra farany nataon'ireo mpanohana. Tsy nisy fisalasalana ihany koa fa i Mr. Williams dia tsy natahorana intsony ny fiarahamonina, ary hitondra soa be dia be.
Ny tranganan'i Stanley "Tookie" Williams dia nanery ny vahoaka hisaintsaina ny tanjon'ny fanamelohana ho faty:
Ny tanjon'ny fanamelohana ho faty ve dia esorina amin'ny fiarahamonina iray izay mety hampidi-doza kokoa?
Ny tanjona dia ny hanala ny olona iray tsy mety amin'ny fanarenana intsony.
Ny tanjon'ny fanamelohana ho faty ve dia ny hampitsahatra ny hafa amin'ny famonoana olona?
Ny tanjon'ny fanamelohana ho faty ve no hanasazy ny mpanao heloka bevava?
Ny tanjon'ity fanamelohana ho faty ity ve dia mamaly faty amin'ny anaran'ilay niharam-boina?
Zarao ny eritreritrao: Tokony ho novonoin'i Stanley "Tookie" Williams ny fanjakana California?
Ny fanehoan-kevitra matetika natao hanohanana ny fanamelohana ho faty dia:
Ho ohatra ho an'ny olon-kafa dia mety ho mpanao heloka bevava, mba hanakanana azy ireo tsy hanao famonoana olona na asa fampihorohoroana.
Hanasazy ny mpanao heloka bevava amin'ny asany.
Mba hahazoana famaizana amin'ny anaran'ireo niharam-boina.
Ireo firenena izay mitazona ny famonoana ho faty Ny taona 58, isaky ny Amnesty International, firenena 58, misolo tena ny ampahatelon'ny firenena manerantany, no mitazona ny fanamelohana ho faty noho ny heloka bevava manerantany, anisan'izany ny Etazonia, ary:
Any Guinea-Bissau , Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Indonezia, Iran, Iràka, Jamaika, Japana, Jordania, Koety, Libanona, Lesotho, Libya, Malezia, Mongolia, Nizeria, Korea Avaratra, Oman, Pakistan, Manampahefana Palestiniana, Qatar, Saint Kitts sy Nevis, Saint Lucia , Saint Vincent Grenady, Arabia Saodita, Sierra Leone , Singapore, Somalia, Sodàna, Syria, Taiwan, Thailandy, Trinidad sy Tobago , Oganda, Emirà Arabo Mitambatra , Etazonia, Viet Nam, Yemen, Zimbaboe.
Ny Etazonia no hany demokrasia tandrefana, ary iray amin'ireo demokrasia vitsy maneran-tany, mba tsy hanafoana ny fanamelohana ho faty.
Ireo fepetra mahazatra natao hanesorana ny fanamelohana ho faty dia:
Ny fahafatesana dia "sazy mendrika sy tsy mahazatra", izay voarara amin'ny ambaratonga faha 8 amin'ny lalàm-panorenan'i Etazonia . Ary koa, ny fomba maro ampiasain'ny fanjakana hamono mpanao heloka bevava dia lozabe.
Ny fanamelohana ho faty dia nampiasaina tsy mitovy amin'ny mahantra, izay tsy afaka manome torohevitra ara-dalàna ny vola, ary koa amin'ny vondrona foko, foko ary fivavahana.
Ny sazy fanamelohana ho faty dia ampiharina ara-drariny sy tsy misy antony.
Voaheloka voaheloka ny olona tsy manan-tsiny nahazo sazy fanamelohana ho faty, ary nampalahelo, novonoin'ny fanjakana.
Ny mpanao heloka bevava vonjimaika dia afaka mandray anjara mavitrika amin'ny fiarahamonina.
Ny famonoana ny ain'olombelona dia ratsy ara-pitondran-tena amin'ny toe-javatra rehetra. Misy antokom-pinoana sasany, toy ny Eglizy Katolika Romanina, manohitra ny fanamelohana ho faty satria tsy "velona".
Ireo firenena izay nanafoana ny famonoana ho faty
Hatramin'ny 2008 isaky ny Amnesty International, firenena 139, izay misolo tena roa ampahatelon'ny firenena eran-tany, dia nanary ny fanamelohana ho faty noho ny antony ara-moraly:
Angola, Arzantina, Armenia, Aostralia, Aostralia, Azerbaijan, Belzika, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Boligaria, Burundi, Cambodia, Kanada, Cape Verde , Kolombià, Nosy Cook, Costa Rica , Cote D'Ivoire, Kroasia, Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina , Repoblika Dominikanina . , Luxembourg, Macédoine, Malta, Nosy Marshall , Mauritius, Meksika, Micronesia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Mozambika, Namibia, Nepal, Nouvelle Zelande , Nicaragua, Niue, Norvezy, Palau, Panama, Paraguay, Filipina, Polonina, Portogaly , Romania, Rwanda, Samoa, San Marino , Sao Tome sy Principe, Senegal, Serbia (including Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Nosy Salomon , Afrika Atsimo , Espaina, Suisse, Suisse, Timor-Leste, Togo, Tiorkmenistana , Tuvalu, Okraina, Royaume-Uni , Uruguay, Ouzbékistan, Vanuat u, Venezoela.
Tamin'ny taona 2009, nisy fifampidinihan'ireo feo manentana milaza ny tsy fahamendrehan'ny fanamelohana ho faty. Ny New York Times dia niompana tamin'ny 1 jona 2009:
"Tsy misy fanararaotam-pahefana ataon'ny governemanta noho ny famonoan'olona tsy manan-tsiny, saingy tsy izany no mety hitranga raha tsy mahavita miditra amin'ny Troy Davis ny Fitsarana Tampon'i Etazonia."
Troy Davis dia mpilalao ara-panatanjahantena Afrikana-amerikana izay voaheloka noho ny famonoana polisy iray an'i Georgia. Taona maromaro taty aoriana, fito tamin'ireo vavolombelona nahita maso izay nampifandray an'i Davis tamin'ny heloka bevava no niova na namerina tanteraka ny fijoroana vavolombelony tany am-piandohana, milaza ny fanenjehana ataon'ny polisy.
Mr ,. Davis dia nanao fangatahana tsy hita isa noho ny porofo vaovao momba ny tsy fananan-tsiny izay hodinihina any amin'ny Fitsarana, tsy dia misy dikany loatra. Ny fangatahany dia nanohana tamim-pitandremana niaraka tamin'ny taratasy 4000 mahery avy amin'ireo tian'ny Nobel Peace Prize nahazo ny filoha teo aloha Jimmy Carter sy ny Arseveka Desmond Tutu, ary ny Vatican.
Ny 17 aogositra 2009, ny Fitsarana Tampon'i Etazonia dia nandidy ny fihainoana vaovao ho an'i Troy Davis. Ny lahateny voalohany dia napetraka tamin'ny volana Novambra 2009. Atoa Davis dia mijanona ao amin'ny laharana ho faty any Zeorzia.
Fandaniana be loatra amin'ny fanjakana sazy an-dalambe
Ny New York Times ihany koa dia nanoratra ny 28 avrily 2009 op-ed High Cost of Death Row:
"Ho an'ireo antony maro mahavariana hanafoanana ny fanamelohana ho faty - tsy ara-dalàna, tsy manakana ny famonoana sy ny fiantraikany amin'ny vitsy an'isa - afaka manampy iray hafa isika. Fandaniam-bola ara-toekarena amin'ny governemanta izay efa misy alim-bolana efa simba.
"Lavitra ny fironana nasionaly, fa ny mpanao lalàna sasany dia nanomboka nanapa-kevitra faharoa momba ny vidin'ny laharam-pahamehana."
Ohatra, nitatitra ny Los Angeles Times tamin'ny Martsa 2009:
"Any Kalifornia, ireo mpanao lalàna dia mitolona amin'ny vidin'ny fitazonana ny laharam-pahafatesana lehibe indrindra manerana ny firenena na dia gadra 13 monja aza no namono ny fanjakana nanomboka tamin'ny 1976. Miady hevitra momba ny fananganana fonja an'arivony tapitrisa $ 395 tapitrisa dolara ny manampahefana milaza fa ny fanjakana dia tsy afaka tratry ny ananany. "
Ny New York Times dia nitatitra tamin'ny Septambra 2009 mikasika an'i California:
"Angamba ny ohatra faratampony indrindra dia Kalifornia, izay nandany ny fandoavam-bola ho an'ny mpamatsy vola 114 tapitrisa dolara isan-taona, ankoatra ny saran'ny mpigadra mandra-pahafatiny.
Ny fanjakana dia namono olona 13 nanomboka tamin'ny 1976 noho ny vola 250 tapitrisa eo ho eo isaky ny famonoana. "
Ny fandrarana ny fandoavana sazy fanamelohana ho faty momba ny fahafatesana dia nampidirina tamin'ny taona 2009, saingy tsy nahavita nandeha, tany New Hampshire, Maryland, Montana, Maryland, Kansas, Nebraska, ary Colorado. Ny New Mexico dia nandà ny fanamelohana ho faty ny lalàna tamin'ny 18 martsa 2009.
Fijerena ny fiarovana ny fanjakana amin'ny fanjakana
The Compromise Great of 1787
Filoha lefitry ny filoha sy ny very
Mombamomba ny Michelle Obama
Tandindomin-doza eo amin'ny tetibolam-panjakana
Lisitry ny fihaonana amin'ireo mpampiantran'ny gazety amin'ny alàlan'ny tantara
Ireo loka Nobel fandriampahalemana avy any Etazonia
Pros & Cons Consumer Research Research Cell
Top 10 Classic Movies miaraka amin'ny hafatra sosialy
Nahoana i Rosie no rivotra?
Nanazava ny fifindra-monina an-tsokosoko - ny tombom-barotra sy ny fahantrana, ny fiarovana ara sosialy & ny mosary
Ny Arguments Top 3 ho an'ny Fitantanana ny Herisetra
Andro iraisam-pirenena Kominista ve ny Andro Erantany?
Veronica Campbell-Brown: Double mpandresy amin'ny 200 metatra
Ahoana ny fampiasana ny Function NORM.INV amin'ny Excel
Tsidiho ireo karazana 'Archer'
Miteny Eny amin'ny teny frantsay miaraka amin'i Oui, Ouais, Mouais, ary Si
Admiral David G. Farragut: Mahery fo amin'ny tafika an-dranomasina
Ny Adventure Underworld an'i Aeneas ao amin'ny The Aeneid
5 Asa fisakafoanana momba ny fikajiana
Erôs, Grika Andriamanitra fitiavana sy fitia
Ny dikan'ny hoe tavy ravina ao amin'ny Stenika Skeleta
Sokajy: Adjectif classification: fampidirana
Filler Words sy Vocals
Ny Emperora romanista Byzantine Justinian
Urban Legends: Rahoviana i Jamie Lee Curtis no Hermaphrodite?
Ahoana ny fampiasana ny matoanteny denominale ampiasaina amin'ny Gramma?
Nahoana i Mosesy no nafoy tao anaty sobika iray tao anaty sompaky ny renirano?
Earbuds ho an'ny mpilomano: any amin'ny sofina na amin'ny totozy?
Ny "Introvert" sy ny "Extrovert" dia tena midika
Firy ny vola lany tamin'ny fanalana zaza?